Otrikaretina Sida Mandrava Ny Vondrom-piarahamonina Teratany Warao Ao Venezoela · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Marsa 2016 17:41 GMT
Vakio amin'ny teny English, Italiano, Deutsch, Ελληνικά, Español
Manampahaizana manao fitiliana savaranonando ny VIH amin'ny marary iray ao Warao. Amantarana raha ahitana VIH ny marary iray, roa ny fitiliana atao: voalohany, zahana ny santionan'ny rora ary raha hita fa voan'ny aretina dia tsy maintsy manao fitiliana rà ny marary. Sary avy amin'i Minerva Vitti, nahazoana alalana.
Ity tantara ity dia fampifanarahana ny fizarana voalohany amin'ny fikarohana notontosain'i Minerva Vitti ary efa navoaka tao amin'ny ArmandoInfo.
Ny andro nanontanian'i Monsignor Felipe Gonzalez ny ny mponin'i San Francisco de Guayo, tanàna indizeny iray miorina ao amin'ny vinanin’ Orinoco ao amin'ny farany avaratra-atsinanan'i Venezoela hamariparita'ireo olona izay tsapany alohan'ny ahafatesan'izy ireo, dia nanomboka nanonona tazo, aretim-pivalanana, fahaverezan-danja, fahalemena, ary fanimpanina ny olona. Tsy nisy nilaza ilay aretina mahafaoka ireo soritr'aretina rehetra ireo ry zareo.
“Ry namana, matin'ny SIDA ianareo,” hoy ny pretra. Ao San Francisco de Guayo, tahaka ny ao amin'ny Vondrom-piarahamonina ao akaiky – maro tamin'ireo mponina Warao no tsy miantso ny SIDA amin'ny anarany, fa ny soritr'aretina iainan’ izy ireo.
Iray amin'ireo vondrom-piarahamonina valo nanaovan'ny Dr. Julián Villalba sy mpikaroka hafa avy ao amin'ny Ivon-toeram-pikarohana Siantifika Venezoeliana sy ny Ivontoerana momba ny Fitsaboana Natoraly ao amin'ny Oniversite Afovoany ao Venezoela fikarohana tamin'ny faramparan'ny taona 2011 tany i San Francisco de Guayo, izay miorina ao amin'ny kaominina Antonio Diaz ao amin'ny fanjakana Venezoelana Vinany Amacuro, ka tamin'izany no nahitana trangan’ otrikaretina Sida (VIH) 55 teo amin'ireo mponina teratany.
Taitra ireo manam-pahaizana satria 9,55%-n'ireo mponina ao amin'ny vondrom-piarahamonina valo nanaovana fikarohana dia tratran'ny otrikaretina avokoa. Izany taha izany no avo indrindra eo amin'izao tontolo izao amin'ny faritra lavidavitra an'i Afrika Atsimon'i Sahara, izay 5%-n'ny mponina no voan'ny sida.
Nampahafantarina nandritra ny fivoriana miaraka amin'ny Minisitra Lefitry ny Fahasalamana Miriam Morales sy Claudia Morón tamin'ny taona 2012 sy taona 2014 ny voka-pikarohana manavaka ny maha karazanaVIH ny aretina mahazo ny olona sy ny tahan'ny aretina any amin'ny mponina. Claudia Morón sisa tavela ho manampahefana ara-pahasalamana amin'ny maha minisitra lefitry ny Sampana Fahasalamam-bahoaka azy. Tamin'izany andro izany, nanome antoka ireo mpiasam-panjakana ireo fa handray fepetra satria efa mahafantatra ny fisian'ny olana ny ampahany amin'ny andrim-panjakana, ary mikarakara fikarohana eny ifotony izy ireo.
Tamin'ny taona 2015, nihaona tamin'ireo solontena avy amin'ny biraon'ny mediatora Venezoelana ny sasany tamin'ireo manam-pahaizana tamin'ireo fikarohana ireo sy ireo mpandinika ny [tantara] olombelona ( anthropologues) izay nanatontosa fikarohana hafa hamaritana ny antony ara-tsosialy mahatonga ny aretina VIH ao amin'ny vondrom-piarahamonina Warao (fikarohana notontosain'ny Fikambanana Asa Soa misahana ny Fitomboana sy ny Fivelaran'ny Mponina izay mbola tsy navoaka ny valim-pikarohana) mba hanome vaovao farany momba ny toe-draharaha. Ny hany fantatra taorian'izany, dia nitsidika an'i Tucupita, renivohitry ny fanjakana ao amin'ny Vinany Amacuro izy ireo ary nihaona tamin'ny manampahefana sy nanatontosa atrikasa miaraka amin'ny mpitarika ny vondrom-piarahamonina.
Nanomboka teo, na izany aza, tsy mbola nisy na inona na inona niova.
Aretina mahery vaika kokoa
Mety ho voan'ny SIDA ao anatin'ny valo hatramin'ny 10 taona ny olona iray kanefa tsy ahitana soritr'aretina, sady miely ny otrikaretina. Ny olona voan'ny aretina mahazatra indrindra ao Venezoela, VIH-1 karazany B, dia afaka mivelona mandritra izany fotoana izany tsy mila fitsaboana, kanefa mampitombo ao anatin'ny dimy taona latsaka ny soritr'aretina SIDA ny Warao.
Milaza ny fikarohana hafa fa niditra tao amin’ ny fiarahamonina tokony ho telopolo taona lasa ny otrik'aretina ary nihanaka tena haingana. Fantatra tsara fa mandravarava ny fihanaky ny valan'aretina, ny tahan'ny fifindrany, ary indrindra ny fahatanjahan'ny aretina.
Nanatsoaka hevitra ihany koa ireo dokotera fa ireo vondrom-piarahamonina (tanàna kely) ahitana taha ambony indrindra amin'ny aretina VIH dia i Jobure de Guayo, Usido, ary San Francisco de Guayo, ary ny lehilahy no mora tratran'ny aretina kokoa noho ny vehivavy, ny taha ambony indrindra amin'ny VIH dia eo amin'ny sokajin-taona 15-24 taona. Ambony ny tahan'ny fahafatesana tamin'ny aretina VIH tao anatin'ny valo taona; ary tsy miova ny tahan'ny aretina VIH ao amin'ny vondrom-piarahamonina nanaovana ny fikarohana tao anatin'ny telo taona farany.
Tamin'ny 2007, nahitan'ny Vokovoko Mena Venezoeliana tranga VIH 15 tao amin'ny fokonolona San Francisco de Guayo sy ny manodidina azy (Murako, Jobure, Nosy Jobure, Ajimurina, Merejina, Kuamujo, La Mora, ary Guayaboroina) . Ankehitriny, hita ao amin'ny vondrom-piarahamonina Warao 26 ny VIH. Nanjavona ny lehiben'ny fokonolona Jeukubaca roa taona lasa izay raha matin'ny SIDA ny ankamaroan'ny mponina tao aminy. Nohamafisin'ny lisitry ny antontanisan'ny maty tany amin'ny hopitaly Guayo izany. Lehilahy avokoa ny ankamaroan'ireo maty. Nandao ny tanàna kosa ny vehivavy sisa tafajanona.
Ny vondrom-piarahamonina ahitana tranga ambony indrindra amin'ny VIH dia Nabasanuka (tranga telo maneho ny 5% ), Burojosanuka (tranga roa maneho 6,6%), ary Bamutanoko (tranga iray na 5,26%-n'ny mponina). Porofo mazava ireo tarehimarika ireo fa ny zava-mitranga ao amin'ny Vinanin'i Orinoco ao Venezoela dia areti-mifindra – valan'aretina izay mampidi-doza mety hitarika ny fahafonganan'ny fokonolona vazimba teratany iray manontolo.
Ity fizarana voalohany amin'ny fikarohana nataon'i Minerva Vitti ity dia efa navoaka tao amin'ny ArmandoInfo. Ahitana fizarana efatra ny fikarohana nataony, izay manaraka ny rafitra Diploma amin'ny Asa fanaovan-gazety Fanadihadiana avy amin'ny Ivon-toeran'ny Gazety sy ny Fiarahamonina (IPYS) miara-miasa amin'ny Oniversite Katolikan'i Venezoela Andrés Bello (UCAB). Vakio ato ny lahatsoratra teo aloha ato amin'ny Global Voices teny malagasy mikasika ny fepetra ara-pahasalamana ao amin'ny fiarahamonina Warao nosoratan'i Minerva.